नेकपाको रो’ग एमालेमा सर्यो !
Homeबिबिधनेकपाको रो’ग एमालेमा सर्यो !
काठमाडौं । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद पुनःस्थापित नेकपा एमालेमा सरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल समुहबीच वि’वाद बढ्दै गएको हो । अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रुपमा आफु पक्षिय केन्द्रीय सदस्य बोलाएर निर्णय गरेको भन्दै नेपाल समुह राष्ट्रिय भेलामा जु’टेको छ ।
ललितपुरको एक पार्टी प्यालेसमा बुधबारबाट शुरु भएको भेलामा मुख्य विषय पार्टी एकताका लागि २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा लैजानुपर्ने उल्लेख छ । भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै नेता नेपालले अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री ओलीमाथी ग’म्भिर आक्षेपहरु लगाएका छन् ।
उनले नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले ह’र्षबढाइँ गरेर सुनियोजित रूपमा पार्टी विभाजन गर्न लागिपरेको आरोप लगाएका हुन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ। ‘संविधानको गलत व्याख्या गर्दै अदालतले दुई पार्टीको राजनीतिक एकतालाई कानूनी व्याख्याद्वारा नेकपा एमालेलाई एकीकरणभन्दा अगाडिको अवस्थामा पु¥यायो ।
त्यो घटना कम्युनिस्ट आ’न्दोलनका लागि हामी आफैंले गरेको वाचाको प्रतिकूल थियो’, प्रतिवेदनमा अगाडी भनिएको छ, ‘त्यसमा समेत ह’र्षबढाइँ गरेर कमरेड केपी ओलीले एकताबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनलाई आफ्नो गु’टको विजय र अरूको प’राजयको रुपमा प्रचार गराउनुभयो ।’
नेता नेपालले फागुन २८ गतेको निर्णयमार्फत सुनियोजित ढंगले पार्टी विभाजनमा लागेपछि एकता बचाउन कार्यकर्ता भेला गर्नु परेको उल्लेख गरेका छन् । ‘…कमरेड केपी ओलीको सुनियोजित रुपमा पार्टी विभाजन गर्न अगाडि बढेपछि नेकपा (एमाले)को एकता बचाउन र कम्युनिष्ट आ’न्दोलनको रक्षा गर्न नेकपा (एमाले)का समस्त सदस्यहरुलाई गोलबन्द गर्नु अनिवार्य भयो ।
त्यही ऐतिहासिक दायित्व बो’धका साथ यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको हो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।संस्थापन पक्षका नेताहरु भने यो भेला एकताका लागि नभई मुल नेतृत्वलाई खु’इल्याउन आयोजना गरेको बताएका छन् । नेकपाका नेता शंकर पोखरेलले पार्टी र आ’न्दोलनको मुख्य नेताका विरुद्धमा प्र’हार केन्द्रित गरेर पार्टी एकताको रक्षा एंव आ’न्दोलनको हित र विकास नहुने बताए ।
उनले नयाँ आवरणमा अध्यक्षमाथी गरिएको प्र’हार र घे’रावन्दी अस्विकार्य रहेको बताए । ‘अहिले एमालेमा सि’र्जित वि’वाद नेकपा भित्रको विवादको निरन्तरता हो । नयाँ आवरणमा अध्यक्ष माथि गरिएको प्र’हार र घे’रावन्दी अस्विकार्य छ’, नेता पोखरेलले भने ।अध्यक्ष ओलीले पनि यसअघि नै भेलामा उपस्थित हुनेलाई पार्टीको विधान, संविधान र कानुन बमोजिम अगाडी बढ्ने चे’तावनी दिइसकेका छन् ।
सोही अनुरुप एमालेका दलका नेता ओलीले विहिवार संसदीय दलको बैठक आव्हान गरेका छन् । नेपाल समुहको भेला चलिरहेका बेला विहिवार विहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक आ’व्हान गरिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।दलका प्रमुख सचेतक भट्टराईले दललाई एक ढि’क्का बनाएर लाने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको बताए ।
‘पार्टीभित्र स’मस्याहरू देखिएका छन्, यस्तो बेला पार्टीको संसदीय दललाई कसरी एक ढिक्का बनाएर लाने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो’, उनले बताए । सो भेलामा नेपाल समुह उपस्थित नहुने भएको छ । भेला चलिरहेकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने सो पक्षका नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।एमालेमा अहिले विगतको नेकपा जस्तै दुई समानान्तर गतिविधि हुन थालेका छन् ।
नेकपामा पनि तत्कालिन पहिलो अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट ह’टाउन खोजेपछि विवाद शुरु भएको थियो । जसले पुष ५ गते आइपुग्दा प्रतिनिधिसभा वि’घटन र विभाजनको अवस्थामा आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि एमाले ब्युँ’ताएपछि नेकपाको वि’वाद जस्तै स्वरुप सो पार्टीमा छिरेको हो ।